जनताको सेवा नै मुख्य दायित्व हो : वडा अध्यक्ष डाँगी - Rajmarg Online
जनताको सेवा नै मुख्य दायित्व हो : वडा अध्यक्ष डाँगी
शक्तिराम डाँगी : वडा अध्यक्ष
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर १४
स्वागत छ अध्यक्ष ज्यू यहाँलाई ।
यहाँहरुको अनलाईन परिवारलाई धन्यवाद छ ।
वडाका नियमित कार्यक्रमहरुमै व्यस्त छु । जनताका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने काममै व्यस्त छु ।
घोराही १४ कस्तो वडा हो ?
घोराही १४ उपमहानगरकै अन्य वडाको तुलनामा केही फरक ईतिहास बोकेको वडाका रुपमा मैले लिएको छु । साविक घोराही पञ्चायत हुदा २, त्रिभुवन पञ्चायत तथा घोराही नगरापालिका हुदा १० र अहिले संघिय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएपछि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंम्वर १४ भएको छ ।
तत्तकालिन ५ विकास क्षेत्र १४ अञ्चालन हुदा दाङको सदरमुकाम यही क्षेत्र राप्तिको केन्द्रका रुपमा रहेको थियो । त्यत्तिवेला सबै जसो सरकारी अड्डा अदालतसहित सम्पुर्ण कार्यालयहरु र पुरानो बजार समेत यही क्षेत्रमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
वर्तमान समयमा घोराही १४ भित्र अधिकांश बजारी क्षेत्र तथा व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ । अहिले वडाभित्रका ३ सय घरधुरी कृषिमा पेशामा आश्रित रहेका छन् । यसका साथै वडाभित्र पार्क, धार्मिक क्षेत्र, बन, खोला, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा लगाएत धेरै कुराहरु यही वडा भित्र रहेका छन् । दाङ जिल्ला र यसका आसपासका जिल्लाका नागरिकको लागी पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, बजारलगाएत थुप्रै कामका लागी विशेष गरेर घोराही १४ उपयोगी बन्दै आएको छ ।
वडा अध्यक्ष भएको झण्डै ५ वर्षको अवधिलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
त्यत्ति बेला वडा कार्यालय, कार्यालय जस्तो थिएन । पहिलो काम त हामीले कार्यालय व्यवस्थापनका लागी ग¥यौ । कार्यालयमा आवश्यक पर्ने फर्निचर सामाग्रीदेखी लिएर बाहिरी कम्पाउण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने काम ग¥यो । त्यति वेला बाहिरी कम्पाण्न्ड हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने समस्या थियो अहिले अहिले भवन पुरानो भएपनि टाईल लगाएर कम्पाउन्ट गरेर सुरक्षित र व्यवस्थथित बनाउने काम गरेका छौँ ।
कानुन, निति नियम केही थिएन । हाम्रो संबिधानमा संघियताको मर्मअनुसार ३५ वटा काम कर्तव्य अधिकार भएको व्यवस्था त थियो तर कार्यान्वयनका लागी निति नियमावली धेरै कुरा बनाउनु पर्ने थियो । जो नगरसभाबाट यी कार्यहरु गर्नमै धेरै समय खर्चिनु प¥यो । यसका अलाव सकेजति वडाबासीको हितका लागी काम गर्ने कामलाई निरन्तर जारी राखेको छु ।
घोराहीका १९ वडा मध्ये घोराही १४ मा के कस्ता खालका नमुनायोग्य कामहरु भएका छन् ?
हामीले हाम्रोतर्फ बाट निरन्तर सकारात्मक र राम्रो काम गर्ने प्रायासलाई जारी राखेका छौ । हामीले के ग¥यौ र कति ग¥यौ भन्नु भन्दा पनि समग्रमा घोराहीका सबै वडाका कामहरुलाई मुल्याङ्कल गर्ने र यो वडाले राम्रो काम ग¥यो भनेर हामीलाई निर्वाचित गराउने नागरिक र उपमहानगरले मुल्यांकल गरिरहेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । तर पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट संक्षिप्तमा ३ वटा काम मात्रै भन्नुपर्दा एउटा २०५८ साल मंसिर ८ गते व्यारेक आक्रमणपछि बन्द रहेको ढोडेनी जानेबाटो साईडबाट भएपनि खोल्न सफल भएका छौँ ।
दोस्रोमा बेपत्ता परिवार सितली मगरको आवास निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । मनकामना सामुदायिक बन शहरी हरित पार्क झिंगौरामा झिंगौरा गाउकै तिन जना शहिद ओमभक्त चौधरी विजय, लौटन चौधरी, पृथ्वी चौधरी पृथीपालको शालिक निर्माणको काम थालेका छौ ।
साथै त्यहाँ शहरी हरित पार्क निर्माणको काम पनि तिव्र गतिमा भैरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागी सब्जीमण्डीको भवनमै दिवा सेवा मिलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका छौँ । पानी पर्दा हिलाम्मे हुने सब्जीमण्डीको आरसिसि सम्पन्न गरेका छौँ । झिंगौरा हुदै स्वर्गद्धारी आश्रम हुदै स्वर्गद्धारी टोलसम्मको लामो समय सम्म विवाद भएको फुटफाथसहितको कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौँ ।
घोराही खानेपानी तथा उपभोक्ता तथा सरसफाई समितीको सहयोगमा सेवार खोलामा समुईल र ढोडेनिमा डिप बोरिङको व्यवस्थापन गरी वडा भित्र रहेको खानेपनिको समस्यालाई हल गर्न सफल भएका छौँ । नयाँ बजार तिनकुने चोकको पुरानो गेष्ट हाउसलाई शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा विकास गरी स्थापना गरेका छौँ । लगाएतका जनताका आवश्यकता मुखी थुप्रै कामहरु गर्न सफल भएको महशुस गरेका छौ ।
जनताका हितका लागी थुप्रो कामहरु गर्दा गर्दै पनि नागरिकबाट आउने गुनासोहरुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नागरिकबाट आउने गुनासोहरुलाई मैले मेरा नागरिक सचेत भएको रुपमा बुझेको छु । विकासका कामहरु गर्दा नागरिकहरुबाट आउने गुनासोहरुलाई विकासको तिव्रता र नागरिकको सक्रियता भनेर बुझ्नुपर्छ । समय गतिशिल र परिवर्तनशिल हुन्छ । विकासका नमुनाहरु पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन् । त्यसकारण गुनासो पनि निरन्तर आउने र विकासका काम निरन्तर भैरहने हुन्छ । गुनासोको अन्त्य नभएपनि जनतामुखी काम गरेर यसलाई काम गर्ने प्रयासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने हुन्छ । जुन अभियानमा हामी लागी रहेका छौँ ।
उपमहानगरको वातावरण विपद व्यस्थापन महाशाखा संयोजक भएर पनि काम गरिरहदा अवसर र चुनौति के कस्ता रहे ?
मलाई यो जिम्मेवारी प्रदान गरेको नगरकार्यपालिका र नगरप्रमुखलाई विशेष धन्यवाद छ । जिम्मेवारी पाएदेखी अहिलेसम्मको अवधिमा हामीले घोराहीलाई सरसफाईमा हिजोको भन्दा अहिले धेरै व्यवस्थित गर्न सफल भएको महशुस गरेका छौँ ।
अहिले पनि दाङका केही स्थानिय तहमा फोहर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएका बेला हामीले फोहरलाई मोहरमा बदल्न सफल भएका छौँ । यस अभियानलाई सफल पार्न ४ जना स्वयमशेवक परिचालन गरेका छौ । घोराही चोकदेखी कटुवा खोला र शहिद कृष्णसेन ईच्छुक मार्गको केही भागमा ग्रिनबेल्ड निर्माण गरेर वातावरण टेवा र बजारको सुन्दरता बढाउने काम गरेका छौँ ।
यसैविचमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको सामना गर्दा धेरै नागरिकलाई नाका क्षेत्र लगाएतका सडकमा रहेका हजारौ नागरिकको उद्धार ग¥यौ । राहत वितरण, क्वारेनटाईन तथा आईशोलेशन सेन्टरहरु निर्माण र प्रयोग ग¥यो । सहज तरिकाले खोपको व्यवस्थापनलगाएतका नियमित कार्यहरु भैरहेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रविच गठबन्धनको सरकार हुदा खासै गुनासा सुनिएनन्, अहिले गठबन्धन टुटैसंगै नगरसभामा पनि तपाईहरुका केही गुनासा देखिन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिने ?
प्रश्न सोधाई भन्दा अवस्था र विषय फरक हो । जस्तै नगरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा विगतमा विषयगत समितीहरुका संयोजकसहितको एउटा योजना तर्जुमा समिती छ । यो समितीले योजना कार्यक्रम नगरकार्यपालिकामा पेश गर्छ । नगर कार्यपालिकाले सभामा पेश गर्छ । सभाले अनुमोदन ग¥यो भने योजना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
जस्का लागी यसवर्ष लागत सहभागिताका योजनाहरु छनोट गर्दा योजना तर्जमा समितीको बैठक नै बसेन । योजना संसोधनका लागी कार्यपालिकामा वडास्तरिय योजना संसोधनका विषयमा छलफल भयो । नगरस्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु संसोधन गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने कुनै छलफल भएन ।
तर हाम्रो बुझाई र नियमसंगत कुरापनि यी माथि भनिएका कुराहरुको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । जस्का लागी योजना संसोधन गर्नुपर्ने भए कुन योजना कति नंम्वर शिर्षक, कति पैसा अपुग, कुन शिर्षकबाट संसोधन गरेर ल्याउने, कुन शिर्षकमा घटाउने भन्ने उल्लेख गरेको ड्राफ्ट गरी हट कपी सभाका प्रत्येक सभासदका हातमा दिनुपर्ने थियो ।
यो त धेरै टाढाको कुरा, कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई समेत कुनै जानकारी नगराई योजना संसोधको मात्रै प्रस्ताव आयो । अर्काेकुरा २७ औँ बैठक १० औँ नगरसभा पुसको ७ गते सुरु भयो । अनुमोदनका लागी पेश गरिएको कार्यसुची १ सय ९ देखी १ सय १५ सम्मको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नगरसभासदहरुले सभाका सभाध्यक्ष समक्ष हामीले केही एजेण्डाहरु अध्यन्न गर्न जरुरी ठानेका छौँ ।
त्यसका लागी समय चाहिन्छ भनेर माग गरेको र सभाअध्यक्षले समय दिई अर्काे बैठक पुसको ११ गते ११ बजे सुरुभएपनि कार्यसुचीमै एजेण्डा नराखिएकाले सभासदहरुको असहमती हो । त्यसैले बैधानिक र नियम संगत विशेष सभा बोलाउन लिखित अनुरोध गरेका छौँ । त्यस कारण गठबन्धन नभएका कारण बिरोध भएको नबुझिदिन मेरो अनुरोध छ ।
सहकार्य, सहमती र समन्वयले नगरको उन्नती र सम्बृद्धि हुन्छ । जसका लागी नगरप्रमुखले विशेष भुमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । निर्वाचित भएदेखी हालसम्म हाम्रो कार्यलाई सहयोग गर्ने वडाबासी नगरबासी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी, सहकर्मी जनप्रतिनिधी कर्मचारी लगाएत सबैमा नागरिकको हितमा सधैभर समरपित रहेने सहयोग र खवरदारी सधैभर गरिराख्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
समय र संबादका लागी धेरै धेरै धन्यवाद ।
राजमार्ग अनलाईन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद
Prevदाङमा दोस्रो लक्ष्मण डाँगी स्मृती कप २०७८ हुने
Nextविद्यार्थी सँधै आन्दोलित, तर मौन विश्वविद्यालय